XOG XASAASI: Xildhibaan kashifay in wax shaqo ah ka soconin xarunta golaha shacabka! | HalQaran.com
XOG XASAASI: Xildhibaan kashifay in wax shaqo ah ka soconin xarunta golaha shacabka!
Muqdisho (Halqaran.com) – Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa sheegay in xarunta Golaha Shacabka aysan ka socon wax shaqo ah oo dani ugu jirto dadka Soomaaliyeed.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayuu sheegay in aysan iska xil saarin shaqooyinkii loo doortay oo ay ka mid ahaayeen la xisaabtanka Xukuumadda, Matalaada Shacabka iyo Sharci dejinta.
Guddoonka Golaha Shacabka ayuu ku eedeeyay in aysan ogoleyn in lala xisaabtamo Madaxweynaha dalka, Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda iyo Golaha Wasiiradda Soomaaliya.
Si kastaba, qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed iyo Siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood ayaa horay u sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu gacanta u galay Xukuumada, islamarkaana uu meesha ka baxay la xisaabtankii Xukuumadda.
la xisaabtanka madaxweynaha